Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Isbahaygsiga PAFD Ee hormuudka ka tahay. ONLF ee Sweden Stockholm oo jawi wanaagsan ku soo dhamaaday.
Shirkii Isbahaygsiga PAFD Ee hormuudka ka tahay. ONLF ee Sweden Stockholm oo jawi wanaagsan ku soo dhamaaday.
Posted by ONA Admin	/ March 13, 2016
Shirka ayaa sidii caadada inoo aheed ku furmay ayadaha qura anka kariimka ah Sh xaashi amin oo soo jeediyaay ayadaha qura anka ayaa ku dheeraday ahmiyada ay ledahay wadajirka iyo is garabsiga qoomiyadaha ku hoos dulman taliska gumaysiga Ethiopia ee macangaga ah kuna baraarujiyay dadkii goobta joogay midnimo iyo wadajir.
Madaxdii ka socotay Isbahaysiga PAFD oo madasha ka soo jeedayay khadbado dhaxalgal ah ayaa waxay aad ugu dheeradeen muhiimada loga goleyahay Isbahaysiga iyo heshiiska ururda shanta ah ee ku midoobay Isbahaysiga Mudane Abdinasir gadhweyne oo ka socday Jabhadda ONLF iyo xubin ka socoday Jabhadda olf ayaa ku dheeratay inuu diyaar yahay qorshe lagu midaynayo xog ciidan. siyaasada iyo arimaha bulshadaba madaxda hadal kooda waxaa ka mid ahaa ilig haduu ligligto inuu dhacayo waa hubaal xukumada gumaysiga Ethiopia maaanta waa ligliganaysa waana siibayna Isbahaysigana waa u diyaar qorshihii iyo xeerkii daris wanaag ee qoomiyadaha ku tashan lahayeen.
Waxaa isagana madasha ku soo bandhigay sawiro muujinaya intii hada mudaharaadka oromia socday dhibkii laa gaystay shacabka xubin ka socday ururka dhalinyarada oromai ee
loo soo gaabiyo KIA xubinkan ayaa ugu baaqay ururweynaha dhalinyarada Ogadenia OYSU inay wada shaqayn yeeshan sababtoo ah wax gumaysiga si fuduud u tuuri kara waa dhalinyarada oo xoogoda mideeya .
Marwo Ruqiya abdi ,oo u hadashay Ururka haweenka Ogadenia ayaa madasha ka soo jeedisay khadbad dhagxal gala ah oo halmar badashay madashii shirku ka socday kuna dheeratay taariikhda ogadenia iyo dagaalkii lala galay 25 sano u dambaysay gumaysiga nacabka ah uguna baaqday ururka haweenka oromaia iyo dhamaan Isbahaysiga midnimo hadalkii ruqiya waxaa ka mida ahaa maanta aduunkan aan joogno xoolihiina waa xorooben marka ma dhici karto inaan gumaysi ku jiro waxaana lafdhabar u ah tuurtida gumaysiga gabdhaha Isbahaysiga marka waa inaan kacnaa .
Waxaa la gudaba galay su aalihii la waydiinayay madaxdii ka socotay Isbahaysiga oo u badnaa su aal ku saabsanaa wax uu qaban doono iyo sida xooga loo midaayn karo su aalo iyo talobixin kadib shirka ayaa lasku balansaday midnimo iyo wada tashi guud wuxuuna ku soo gabagaboobay jawi farxad iyo midnimo iyo iftiin xarnimo dadkii u bildhaamay.